Isizathu silula - ukuxhumana ngenethiwekhi kuholele ekutheni ngithole umsebenzi wami oyinhloko futhi ngiholele kuwo wonke amathuba wesibili. Ngaphandle kwenethiwekhi, ngabe angikho lapho ngikhona - futhi bengingeke ngithole amathuba angivulekele okuya lapho ngizoba khona ngokulandelayo.
Uma isikole sifuna ukukhuluma obala njengekhono elidingekayo, othisha kumele banikeze ukuxhumana ukunakwa okukufanele. Abafundi kumele bafundiswe ngokuthola amathuba okuxhumana nabantu, indlela yokunakekela nokunakekela ubudlelwane babo benethiwekhi, ukuhlakulela ubukhona be-inthanethi - kanye nokuthi ungazuza kanjani ngakho konke okungenhla. Uma ungeke ukwazi ukugcwalisa isifundo esivunyelwe esihlokweni, ngibheke phambili ekuboneni amanyuvesi namakolishi enza imihlangano yokufundisana ngesihloko.